CIA VS. CPA - Ndeupi Certification iri nani? [It's a Close Call]
pamusoro 7 Best CPA Courses
CPA bvunzo Zvinodiwa
Deginamajai Vs CPA: Ndeupi Certification iri nani For You?
23 Aug Deginamajai Vs CPA: Ndeupi Certification iri nani For You?
Posted at 22:50h mu Alternate Articles kubudikidza Bryce Welker, CPA 1 Comment
Updated:Gumiguru 15, 2018
Hazvina mubvunzo runonyengera kupindura: Unofanira kuva munhu Vaipupurirwa Internal Auditor (deginamajai) kana vaipupurirwa Public zveakaunzi (CPA)? Vanoremekedzwa nezvezvaiitwa unyanzvi kuti kunatsiridza unyanzvi hwako uye kufambisira mberi basa rako, asi sei sarudza? Ngatitange nokutyora pasi chii nomumwe credential zvinoda tichitarisa nguva wazvipira, nesimba, uye mari.
Chii chinonzi CPA?
Chii chinonzi deginamajai?
Deginamajai Vs CPA: Certification Zvinodiwa
Deginamajai Vs CPA: The bvunzo
Deginamajai Vs CPA: mari
saka, Ndeupi nani?
Vanopupurirwa Public Accountants vanotarisirwa kuita mabasa avo tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira. Sei? Nokuti basa nokuita mabasa chokuita pachena chizvidavirire uye zvemari nhau, akadai Pakugadzirira zvemari statement, gadziriro mutero, uye chinyorwa anochengeta-zvose maererano yakatarwa bumbiro mitemo. CPAs ndivo chete vanhu zviri pamutemo kubvumirwa wemasaini uye kuzviisa pasi mashoko zvemari kuti IRS. Kuti ave CPA unofanira kupfuura aiva nomukurumbira CPA bvunzo kuti chinotarisirwa ne AICPA. Inoitwa 4 zvikamu: Accounting uye Auditing, Business Environment uye pfungwa, Financial Accounting Kushuma, and Regulation.
Kuti ave CPA unofanira kupfuura aiva nomukurumbira CPA bvunzo kuti chinotarisirwa ne AICPA
Vanopupurirwa Vaongorori Internal pfungwa dzinenge bedzi achiita womukati audits kuti chekambani financials uye zvemukati controllers. CIAs vanogonawo kuita audits mashoko enyika, pokuita nezvimwe anokosha zvemukati protocols. Ichi basa rinoda kuti nguva dzose uye kugara nemupristi yetsika. Sezvinoita CPA, kuva deginamajai anofanira akunde bvunzo. The deginamajai bvunzo chinotarisirwa ne Institute of Internal Vaongorori (IIA) uye ine 3 zvikamu: Business Knowledge nokuti Internal Auditing, Tsika Internal Auditing, uye Essentials pamusoro Internal Auditing. Unogona kudzidza zvakawanda pamusoro zvakanakisisa deginamajai prep makosi pano.
Kuti ave deginamajai, unofanira kusangana zvinotevera zvinodiwa:
Ndakawana dhigirii-gore mana post-yechipiri kubva yunivhesiti aizivikanwa zviri pamutemo. (Izvi zvinogona kuchiiswa basa ruzivo; kana basa ruzivo makore mashanu pamwe nemakore maviri dzidzo post-yechipiri, kana makore manomwe rukasimbiswa Auditing basa.)
Makore maviri rukasimbiswa odhita basa ruzivo (dhigirii tenzi kunogona chinzvimbo gore rimwe)
Rasai-chikamu 3 deginamajai bvunzo
Bhadharai zvose zvinoshanda kushanda uye bvunzo yechikoro
Submit munhu Character Reference Form akasaina pedyo deginamajai, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, kana basa rako foromani
Bvumiranai kuti kuteerera IIA kuti Code of Ethics
Zvinopa umboo yokuzikanwa
The nguva vaifanira kuva deginamajai dzinosiyana zvikuru, inobva zhinji kusarudza kuti musangano dzidzo / basa ruzivo zvinodiwa. Unofanira 4 Makore ari kukoreji kuti awane yenyu Rokutenderwa dhigirii. Ipapo unofanira 2 makore anotenderwa basa ruzivo, unounza nhamba kuti 6 makore. IIA anobvumira 4 Makore kupfuura bvunzo (iro rine muzasizasi zvichipfuura zvazvingava), saka yaigona kutora iwe 10 Makore kuva vaipupurirwa. Kuva CPA, unofanira kusangana zvinotevera zvinodiwa:
Meet dzidzo uye ruzivo zvinodiwa U.S. mamiriro mu yauri kuenda kuti marezinesi. Izvi zvakasiyana ehurumende kuti mamiriro, asi vakawanda zvinodiwa kukukumbirai kuti kanenge kwemakore mana dhigirii chizvidavirire, zvebhizimisi kana kufanana munda UYE maviri makore vakawanda chizvidavirire basa
Pfuurai mana-chikamu CPA bvunzo
Ndinokurudzira zvakasimba kuti kunyatsotevera kuongorora zvinodiwa zvako mamiriro usati tichiita chinono kwako CPA rwendo. Kusiyana CIAs, vari munyika vaipupurirwa, CPAs vanofanira kuwana rezinesi neimwe mamiriro umo vanoita. Yamuchapedza kumativi 5 makore kuwana tsvimborume wako uye / kana dhigirii watenzi kuzadzisa 150 chikwereti maawa kuva CPA. Kana mamiriro ako zvinoda basa ruzivo, zvino wedzera mumwe 2 makore. The AICPA unobvumidza 18 mwedzi kupfuura CPA bvunzo. Kuti zvose zvinowedzera kumusoro 8 ½ makore.
The deginamajai bvunzo iri 100% compute eBhaibheri uye inoumbwa zvitatu dzakasiyana:
chidimbu 1: Internal odhita Basics
chidimbu 2: Internal odhita Practice
chidimbu 3: Internal odhita Knowledge Elements
Unogona kutora chero nguva yose gore chero mumwe ari deginamajai bvunzo 500+ Pearson VUE rinonyanya munyika. The bvunzo runopiwa mu 16 mitauro, kusanganisira Arabic, ChiChinese (chinyakare), Chirungu, ChiFrench, ChiJerimani, ChiHebhuru, ChiIndonesian, ChiItalian, ChiJapanese, ChiKorean, ChiPolish, ChiPutukezi, ChiRussian, ChiSpanish, Turkish, uye Thai. Kana uri nhengo IIA, mari kuongorora zviri $990. Non-nhengo kubhadhara wakazara mutengo $1,150, chiri nei zvakakodzera nguva yako kuva nhengo IIA. The CPA bvunzo rinoumbwa muzvikamu zvina:
Odhita neZvipupuriro (AUD)
Financial Accounting uye Kushuma (kure)
Business Environment uye pfungwa (BEC)
Kufanana deginamajai bvunzo, ari CPA bvunzo iri 100% kombiyuta inobva. zvisinei, zviri chete chinotarisirwa Via Prometric Testing Centers munguva mana mahwindo-mwedzi miviri rose gore. The bvunzo haina kuuyiswa March, Chikumi, September kana December. Mari CPA bvunzo kunosiyana-siyana maererano mamiriro / utongi, asi kazhinji anoda kubatsira kubva $600 kuti $800 nokuti zvikamu zvose zvina.
nyanya, CPAs kuwana zvishoma kupfuura CIAs, asi izvi zvose kunobva deginamajai kuti basa rokuti. Zvimwe anogona kuona imwe deginamajai kana CPAs muhoro, akadai nzvimbo, musoro wenyaya, uye makore ruzivo achasarudza muhoro wako. MuMedhia akapiwa muhoro nokuda CPA iri $62,123 uye $59,677 nokuti deginamajai. Recently kwave kune kwakawedzera kudiwa akasungirirwa kuzvidavirira uye kwakawedzera kuongororwa., Kugadzirwa basa kukura netariro vaviri CIAs uye CPAs.
Ehe saizvozvo, izvi zvose zvinoenderana zvaunoda kuita. The deginamajai advertising zviri nyore kuwana kupfuura CPA kubvira bvunzo rinonyatsotarira 1 chikuru chinoumba rokuzvidavirira, nepo CPA bvunzo hunovakirwa 4. Kana iwe kunakidzwa zvizere basa uye kuferefeta, ari deginamajai advertising zvaizofamba zvakanaka newe. Pane rimwe divi, mumwe CPA kunogona kuita Auditing basa asi ane zvakawanda basa mikana muzvinhu kwemitero uye kushuma, kutanga zvimwe ichiita mabasa akawanda credential. Kana uchida Auditing, mutero, nhau uye mutemo, ipapo CPA nzira zvingava zvakakunakira. Kana uchida standout kunyange zvakawanda mari munyika, unogona kuenda nokuti zvose! Kutanga kwako CPA rwendo, unofanira kutanga nokuongorora chii Ongororo Chokwadi unofanira kushandisa kudzidza kuti bvunzo. Ichi ndicho chokutanga danho guru! Enzanisa TOP deginamajai REVIEW makosi
KUWANA BEST CPA REVIEW CHOKWADI
pamusoro 25 San Diego Accounting Firms
pamusoro 17 Best Gifts for Accountants
Posted at 25 Kurume, 2018 16:31 PM Reply
guru 4 Accounting yemakambani muhoro Kuparara
CPA bvunzo Application Process
Mitemo uye Kubuda pachena
Sei We Rank Courses Our